ကျောင်းမိတ်ဆက်｜Metro general business college General Culture Program　Japanese Language Course
Metro General Business၏ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်း(General Cultural Program)၌ ဂျပန်ဘာသာကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာသင်ယူပြီးမိမိ၏အနာဂါတ်ကိုပုံဖေါ်ကြပါစို့!
Metro General Business Collegeသည် ကွန်ပျူတာ ကုမ္ပဏီကြီးမှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကောလိပ် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။
Metro Groupသည်Softwareရေးသားခြင်းကိုအဓိကဆောင်ရွက်သော Metro Computer Service ၊စာအုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သောKawasaki Industries ၏Metroစာအုပ်ဆိုင်လုပ်ငန်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့်Metroလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စင်တာတို့မှဖွဲ့စည်းတည်ထာင်ထားသည့်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်ပါသည်။
ဤကျောင်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီးမှတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသောကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်အောင်လေ့လာသင်
ဂျပန်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်အောင်လေ့လာသင်ယူနှိုင်ရုံမျှမကဂျပန်နိုင်ငံစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီးများ၏အလေ့အထ၊ဓလေ့စရိုက်များကိုပါ လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော
ကောလိပ်ကျောင်းတစ် ကျောင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနာဂါတ်ရည်မှန်းချက်အား ဤကျောင်း တော်ကြီးတွင် တက်ရောက်၍ အကောင်အထည်ဖော်ကြည့်ပါ။
ထူးချွန်ထက်မြက်သော ဆရာ၊ ဆရာမများ စုံညီလှသည့် ဝန်းကျင်တွင် စိတ်အေးချမ်းမြေ့စွာ လေ့လာသင်ယူသွားနိုင်ပါပြီ။ လေ့လာသင်ယူလိုစိတ် အပြည့်ရှိသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား
လက်ကမ်းကြိုဆိုလျှက်ရှိနေပါသည်။ Let’s Try!
Metro General Business College တွင်နိုင်ငံခြားသား ပညာတော်သင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားသော ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားရေး ဌာနအပြင်Smart Phone Application Development သင်ကြားရေးဌာန၊ Web System သင်ကြားရေးဌာန၊ PC Design Creator သင်ကြားရေးဌာန၊ Accounting and Administration Staff နှင့် Medical Office Work စသည့်ယနေ့ခေတ်လူမှုဘဝတင်အသုံးဝင်မည့်ဘာသာရပ် များ အား သင်ကြားပို့ချပေးရန်စီမံထားရှိပါသည်။
"လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရာတွင် အမှန်တကယ်ထောက်အကူပြုမည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ယူချင်ပါသည်" ဆိုသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ခေတ်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် သင်ကြားရေးစနစ် တို့ကို စီမံဆောင်ရွက်ထားပြီး လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောလူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များပြုစုပျိုးထောင်ရေး ကိုမျှော်မှန်းထားပါသည်။စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစုကြီးက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း၌ ရှိသော ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အလုပ်ခန့်အပ်သူများ၏ အမြင်ဖြင့် ပညာသင်ကြားရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမှာ Metro General Business College ၏ အားသာချက်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီး ဂျပန်ဘာသာစကား စွမ်းရည်ပြည့်ဝလာသည့် နိုင်ငံခြားသား ပညာတော်သင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် အထက်ပါဘာသာရပ်သင်တန်းအသီးသီး သို့ဆက်လက်တက်ရောက်၍ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၌ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အသိပညာ၊ နည်းပညာ၊ စီးပွါးရေးစွမ်းဆောင်ရည်များကို လေ့လာသင်ယူရင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်မားသော ဂျပန်ဘာသာစကား စွမ်းရည်များကိုလည်း လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပနိုင်ငံများ၌သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိသောဝါရင့်ဆရာ၊ ဆရာမများကဂျပန်ဘာသာစကားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုအပြင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရမည့်လူနေမှုဘ၀ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအားလည်းကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်စာဌာနသည်Metro General Business College၏ဌာနတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ဂျပန်စာဌာနတွင်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့်အခြားဌာနရှိဂျပန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ပါတွေ့ဆုံဆက်ဆံနိုင်မည့်အခွင့်အရေးကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းသူကျောင်းသား
များအတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာပွဲတော်၊ အခမ်းအနားများကိုလည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံး စီမံဆောင်ရွက်ထားလျှက်ရှိပါသည်။ထို့အပြင် ဂျပန်ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်သေးသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အင်္ဂလိပ်စကား ၊ ဗီယက်နမ်စကားအစရှိသည်တို့တတ်ကျွမ်းသည့်ဝန်းထမ်းများကိုပါခန့်အပ်ထားရှိသည့်အတွက်အခက်အခဲမရှိ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ စာပေ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိပညာသင်နှစ်၏ရမှတ် ၊ ကျောင်းတက်ရောက်မှန်ကန်မှုအခြေအနေ စသည့်ရလဒ်များကိုသုံးသပ်အကဲဖြတ်၍ရလဒ်ကောင်းသူများအတွက်ပညာသင်စရိတ်ကင်းလွတ်ခွင့်အား စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
Metro general business college
General Culture Program Japanese Language Course
©Copyright 2014 - 2016 株式会社メトロコンピュータサービス All rights Reserved.